बूढाबुढी ३४, तन्नेरी ३८ जना – newsagro.com
बूढाबुढी ३४, तन्नेरी ३८ जना
संविधानसभामा कान्छी सरिता, ज्येष्ठ सूर्यबहादुर !
काठमाडौं । दोस्रो संविधानसभामा सबैभन्दा कम उमेरको सभासद को होला ? निर्वाचन आयोगले अन्तिम रुप दिएको नामावली अनुसार पूर्वमन्त्री राजकिशोर यादवकी श्रीमती सरिता यादव ५ सय ५७ मध्ये सबैभन्दा कम उमेरकी सभासद बन्नुभएको छ । आयोगको सूचीअनुसार गणतान्त्रिक फोरमको कोटामा परेकी यादव २५ वर्षकी हुनुहुन्छ । सभासद बन्ने न्यूनतम उमेर हद पनि २५ वर्ष नै हो ।
संविधानसभामा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा हुनुहुन्छ । राप्रपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका थापाको उमेर ८५ वर्ष रहेको छ । अघिल्लो संविधानसभामा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियत बनाउनुभएका नेपाली कांग्रेसका कुलबहादुर गुरुङ सूर्यबहादुर थापाभन्दा ८ वर्ष कान्छो अर्थात् ७७ वर्षको मात्रै हुनुहन्छ । एमालेका सभासद् भरतमोहन अधिकारी पनि ७७ वर्ष पुग्नुभएको छ ।
संविधानसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सूर्यबहादुर थापाले गर्नुहुने भएको छ । थापाले बैठकको अध्यक्षतामात्रै गर्नु हुने छैन, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, प्रचण्डलगायत सबै सभासदले सूर्यबहादुर थापाबाटै सपथ खानुपर्ने भएको छ । थापाले भने राष्ट्रपतिबाट सपथ लिनुहुनेछ ।
संविधानसभामा ‘बूढा’ र तन्देरी हाराहारी
निर्वाचन आयोगको सूचीमा उल्लेख भएअनुसार ६५ वर्ष कटेका सभासद् र ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका सभासदको संख्या लगभग हाराहारीमा छ । तथ्यांक अनुसार ६५ कटेका ३४ सभासद छन् । यसमा प्रत्यक्षतर्फ १६ र समानुपातिकतर्फबाट १८ जना ६५ वर्षभन्दा माथिका सभासद छन् ।
कुल ५ सय ७५ सभासदमा ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका सभासदको संख्या ३८ मात्र रहेको छ । यसमा नेकपा एमालेबाट १ जनामात्रै ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका सभासद बनेका छन् । समानुपातिक तर्फ ३२ वर्षीया रबनी चौधरी एमालेकी एक्ली युवा सभासद हुन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फ ३ जना ३५ वर्षमुनिका सभासद बनेका छन् । सिरहा ६ बाट गणेशकुमार मण्डल, स्याङ्जा १ बाट राजु थापा र रौतहट ६ का सुनीलकुमार यादव ३५ वर्ष मुनिका कांग्रेस सभासद हुनुहुन्छ । समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले ३५ वर्षमुनिका रश्मी ठाकुर र चन्द्रदेवी जोशीलाई सभासद बनाएको छ ।
एमाओवादीले भने समानुपातिकतर्फ बढीभन्दा बढी युवापुस्ताबाट सभासद छानेको छ । ५४ सभासदमध्ये एमाओवादीले २१ जना ३५ वार्ष्भन्दा कम उमेरका सभासद छानेको छ । राप्रपा नेपालले ३५ वर्ष मुनिका २ जनालाई मात्रै सभासद बनाएको छ । त्यसैगरी माले, फोरम नेपाल, नेमकिपा र परिवार दलबाट १/१ जना ३५ वर्षभन्दा मुनिका सभासद बनेका छन् । ४६ वर्षे पूर्वमन्त्री अनिल झाले आफ्नी ३४ वर्षीया तरुनी श्रीमती डिम्पल झालाई सभासद बनाउनुभएको छ ।
← सुगर मिलले गरेन कृषकको २० करोड भुक्तानी
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र दलका नेताहरुसँग परामर्श →